Nanasonia Ny “Zo Hohadinoina” Ho Lalàna ny Filoha Rosiana Putin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2015 7:18 GMT
Mbola tsy tena mazava ny lalàna mikasika ny fepetra momba ity karazam-baovao ity, saingy nitatitra ny RuNet fa tsy maintsy manaporofo ireo fitarainana napetraka fa efa “lany andro” ny vaovao: ohatra, afaka mangataka fanesorana ny rohy momba ny asany ny mpiasam-panjakana raha toa ka tsy manao izany asa izany intsony ary afaka manome antontan-taratasy manaporofo fa efa niala tamin'ny asam-panjakana.
Milaza ny lalàna fa tsy maintsy mandinika ny fangatahana fanesorana ao anatin'ny 10 andro ny milim-pikarohana. Ny tsy famaliana ny fangatahana fanesorana ataon'ny mpiserasera dia mety hitarika fitoriana any amin'ny fitsarana ary raha mahita ny fitsarana fa nandà fangatahana ara-dalàna ny milim-pikarohana dia mety hitarika fandoavana onitra izany.
Ny mahavariana dia tamin'ny 14 Jolay, andro nanaovany sonia ny lalàna “zo hohadinoina”, nahavita nanohana ny “famerana faran'izay kely” ny aterineto i Vladimir Putin. Tamin'ny fandraisany fitenenana nandritra ny forum teknolojiam-baovao ho an'ny tanora nandritra ny [oniversitem-pahavaratra] “Faritry Dikanjavatra” ao Rosia, nilaza izy fa ny lalàna rehetra mifehy ny aterineto dia tokony ampidirina ho “fiarovana ny tombontsoam-bahoaka amin'ny ankapobeny,” ary nanamafy fa tsy mikasa hampiditra “famerana hafa” ankoatra ny efa misy i Kremlin. Mandritra izany fotoana izany, nilaza i Putin fa mahita ny “gaboraraka sy ny fanafenana anarana feno” ho toy ny fandrahonana goavana apetraky ny aterineto.